Malunga Nathi-Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd.
ILaizhou Dongsheng Valve Co., Ltd yinkqubo yevalve yobuchwephesha, yingqokelela yophando kunye nophuhliso, uyilo, ukwenziwa, ukuthengiswa kwenkampani ekhethekileyo edibeneyo ukusukela ngo-2002. izixhobo zokusetyenzwa phambili kunye nenkqubela-phambili yobugcisa obufanelekileyo, ubuchwepheshe obuphezulu kunye namagcisa asemgangathweni kunye nabasebenzi.Indawo yethu yomzi-mveliso yi-30,000 square metre kwaye inabasebenzi abali-148.Emva kweminyaka eyi-19 yokugxila, siye sakhula saba sisiseko sokuvelisa ivalvu eyaziwayo kwihlabathi, kwaye iimveliso zethu zithunyelwa eYurophu, eMelika, eAfrika, kuMzantsi-mpuma weAsia, eOstreliya nakwamanye amazwe angaphezu kwama-70 kunye nemimandla.
Thumela kumazwe angaphandle kunye neeNgingqi
Iimveliso zethu eziphambili luluhlu lwevalvu yokutshekisha, kubandakanya zonke iintlobo zevalve yokujonga idiskhi enye, ivalve yokujonga idiskhi ephindwe kabini, ivalve yokujonga ibhola, iflange kunye nohlobo olusicaba lokujonga ivalve, ivalve yokukhangela, ivalve yediaphragm, ivalve yebhola kunye ivelufa butterfly etc. Iimveliso zisetyenziswa kakhulu petroleum, ishishini imichiza, unikezelo lwamanzi kunye ne drainage, imigodi, izixhobo zokucoca amanzi, umphunga, ukutya ulwelo kunye nezinye iinkqubo zemibhobho, kugxininise kwiimveliso zevalvu ephezulu kwimarike yaseYurophu naseMelika.Inkampani ineteknoloji yemveliso ephambili, izixhobo, ulawulo kunye nenkqubo yolawulo kunye nomgangatho, kwaye iphumelele isiqinisekiso senkqubo ye-ISO9001 kunye nesatifikethi se-CE.
Ukubonelela ngezona mveliso ziphezulu zevalvu kunye nezona zisombululo zolwelo zifanelekileyo kubasebenzisi behlabathi.
Ukuba yinkampani yebenchmark yevalvu abasebenzi abazingca ngayo, ehlonitshwa lishishini kwaye ithenjwe kakhulu ngabathengi.
Ngokusekwe ekunyanisekeni, zama ukuphila ngomgangatho, uphumelele ngokugqwesa, kwaye womelele ngokucokiswa.
Ukunyaniseka: Ukunyaniseka nokuthembeka ziimpawu ezisisiseko zokuba ngumntu, kwaye ulawulo olunyanisekileyo lusisiseko sophuhliso lweshishini.
Sinda ngokomgangatho: Umgangatho sisiseko sokusinda kweshishini, ilitye lembombo lophuhliso, kunye nesixhobo somlingo sempumelelo.
Phumelela ngokugqwesa: Phumelela abathengi kunye nemarike ngoyilo olugqibeleleyo, umgangatho obalaseleyo, ukusebenza okugqwesileyo, ixabiso elifanelekileyo kunye nenkonzo enolwazelelelo.
Yomeleza ngokuchaneka: ngolawulo olusulungekileyo, izixhobo ezintsonkothileyo, kunye nemilinganiselo echanekileyo, sinokwenza iimveliso ezigqwesileyo.Umgangatho weemveliso zoshishino ezisekelwe kwiimfuno zezandla ziphumelele indumiso kunye nokuthembela kwabathengi emhlabeni wonke.
Ukunyaniseka kunye nemfezeko, ukuzinikela kunye nenkuthalo, umanyano kunye nepragmatism, ubuvulindlela kunye nokusungula izinto ezintsha.
Le nkampani yasekwa ngo-2002 kwaye ekuqaleni igxile ekuvelisweni kweevalvu zebhabhathane.
Kwiminyaka engamashumi amabini edlulileyo yophuhliso, inkampani iye yenze iivalve ezine ezinkulu ezibandakanya iivalvu zokujonga, iivalve zediaphragm, iivalve zebhola kunye nebhabhathane, kunye neemveliso ezininzi kunye namakhulu enkcazo.Izinto ezisetyenziswayo ziquka intsimbi etyhidiweyo, intsimbi ekhandiweyo, ubhedu olutyhidiweyo kunye nentsimbi engatyiwayo.
Inkampani iye yagqiba ukuphuculwa kwemizi-mveliso yoluhlu lweemveliso zesakhiwo ukusuka kwimveliso enye kwixesha elidlulileyo.Ngoku iphuhliselwe kwisiseko semveliso yevalvu eyaziwayo yehlabathi engabuyiyo, kwaye iimveliso zenkampani zithunyelwa kumazwe angaphezu kwama-70 kunye nemimandla efana neYurophu, iMelika, iAfrika, iSoutheast Asia, kunye neOstreliya.
INKAMPANI ISIQINISEKISO SESIQINISEKISO SESIBONELELO
IMEKO YEOFISI KUNYE NOKUSINGQONGILEYO kwefektri
Sineminyaka engaphezu kwe-18 yomvelisi kunye namava okuthumela ngaphandle.
Sinesiqinisekiso se-CE kunye ne-ISO9001.
Sinikezela ngewaranti yonyaka omnye.
Senza uvavanyo loxinzelelo kwivalve nganye ngaphambi kokupakisha.
Sinophando lobungcali kunye nophuhliso, iqela lokuvelisa.